Dhaqanka guud -
Posted By: KongoLisolowaa: May 25, 2020 00: 01 No Comments
Maxaad ugu faanaayaan sirta magaca fashion? Sababta oo ah waxaa jira asal la'aan. Farshaxanka Madoow / Afrikaanka ahna ma soo noqon doono illaa iyo inta Noi ... Akhri wax dheeraad ah
Siyaasadda gumaarka walaalaha muslimiinta ah: gabdhaha walaalaha ah ee muslimiinta ah ee maanta ku waayi kara qaddiyada xagga anshaxa "Markay roob da'aan ama ay dhacdo halis, gorayadu waxay kaliya ku daboolaan madaxa ciidda inta lagu gudajiro in jirkiisa oo dhan wali daboolnaan "
Posted By: KongoLisolowaa: May 24, 2020 03: 31 No Comments
Tani waa waxa ay walaasheena muslimiinta ah sameeyaan. Waa maxay ujeeddada madaxaagu daboolayo markay qaybaha gaarka ahi muujiyaan dabeecad dhiirrigelin leh? "Jaahilnimo daacad ah ayaa ka fiican doqonnimada ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: May 24, 2020 00: 01 No Comments
Guud ahaan, gabdhaha walaalaha ah ee Katooliga iyo kuwa Muslimka ahba waxay u labistaan ​​si hufan. Waxay aad ugu dheggan yihiin xirta madaxa waxayna qarsadaan dhamaan qaybaha khaaska ah, gaar ahaan ... Akhri wax dheeraad ah